महिला शिक्षित नभएसम्म पुर्ण विकास हुदैन : उपमेयर राई - समायोजन खबर
महिला शिक्षित नभएसम्म पुर्ण विकास हुदैन : उपमेयर राई
बिमला राई नगर उपप्रमुख हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले महिला लक्षित के–के कार्यक्रम गर्दैछन् । कार्यक्रमबाट महिलाहरुको जीबनस्तर कतीको उक्सियो । जनप्रतिनिधि आएपछि महिलाहरुले कस्तो अनुभुती गर्दैछन् । लगायतका विषयमा त्यस नगरपालिकाका उपमेयर बिमला राईसँग लिएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ ।
अहिलेसम्म महिला लक्षित कार्यक्रम कती भए ?
महिला लक्षित कार्यक्रम चाँही विभिन्न शिर्षकमा गर्दाखेरी संख्याकै आधारमा करीव एक हजार जना महिला लाभाविन्त हुनुभएको छ । आयआर्जन र घरायसी कामकाजको सुविधाको हिसाबले । यो वर्षसम्म हामीले २४ वटा मिल बाड्दैछौ । पहिलो चरणमा ११ वटा बाड्यौ र अहिले ८ वटा बाड्ने चरणमा छौं । हामि निर्वाचित भएदेखि २४ वटा आमा समुहले मिल लिइसक्नु भएको छ । ति २४ ठाउँमा महिलाले लिदा ५ सय घरधुरी महिलाहरु लाभान्वित भएका छन् । नगरपालिकाको ११ वडामा पुर्ण वर्थिङ सेन्टर सेवा सञ्चालन भईरहेको छ । पाठेघर खसेका महिलाहरुलाई यातायात खर्च प्रति महिला पाँच हजार दिंदै आएका छौ । २५ भन्दा महिलाहरुले यो लिइसक्नु भएको छ ।
जहाँ जे संम्भावना र आवश्यकता अनि उहाँहरुले महशुष गरेको आवश्यकतालाई हामीले छलफल गरेर सम्वोधन गर्ने गरेका छौं । अर्को चाँहि विगत वर्षदेखि पुष्पखेती सञ्चालन भईरहेको छ । त्यसको बजारको कुराहरु जोडी राखेका छौ । कृषिसँग सम्वन्धित खानेपानी वा सिंचाईको सामान्य समस्या भएपनि पानीको सा्रेत वा पानी चाँहि खेर जानु हुदैन भनेर त्यस पानीलाइ तरकारी खेती लगाउन लाइरहेको अवस्था छ । विभिन्न ठाउँमा ढाका बुनाई, खाँडी बुनाई सञ्चालन भईरहेको छ । महिलाहरुले व्यावसायिक रुपमा सिक्ने चरणहरु सकिन्दैछ । उहाँहरुलाई हामी उधोग दर्ता गरिदिनेछौ ।
अर्को चाँहि यो धार्मिक ठाउँ भएको हिसाबले पुष्प खेती त राम्रो हुने भइहाल्यो । संगसँगै हामीले सिन्के धुपहरुको पनि तालिम दिएका छौ । सिन्के धुपहरुको पनि उधोग दर्ता गरिदिन्छौ । यता ढाकाको उधोग दर्ता गरिदिन्छौ । साथै विभिन्न खालका सानातिना उधोग व्यावसयाहरु दर्ता गरिदिएर महिलाहरुलाई अधिकतम आयआर्जनमा जोड दिने । आर्थिक उर्पाजन र उहाँहरुको क्षमता विकासमा जोड दिने काम भईरहेको छ । यस्तै, महिला जनप्रतिनिधि र केही संस्थाका महिलाहरुका लागि भाषणकला तालिम गरेका छौ । साँढे सात सयको हाराहारीमा एकल महिलाहरुलाई आवश्यकताको विभिन्न योजनाहरु बनाएर दिएका छौ ।
नगरको अपेक्षा अनुसार महिला लक्षित कार्यक्रम भयो कि भएन ?
नगरपालिकाको अपेक्षा अनुसार महिला लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न भयो भनेर म चाँहि भन्दिन । हुने क्रम जारी छ । महिलालाई अलिक अगाडी नबढाईसम्म र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकरुपमा महिलाले नेतृत्व नगरेसम्म नगरपालिकाको हरेक विकास निर्माणमा टेवा पुग्दैन । तथा सवै निकायमा महिला शिक्षित नभएसम्म पुर्ण विकास हुदैन त्यस कारणले भयो म, भनेर भन्दिन हुने चरणमा छ ।
नगरभित्रका महिलाहरुले साँच्चिकै स्थानीय सरकारको अनुभुती गरेका होलान् ? उहाँहरुको जीबनस्तरमा कतीको सुधार आयो । केही छन् उदाहरणहरु ।
पक्कै पनि किन पनि भने, यस्ता महिलाहरु पनि छन् । यो त अलिकती हाम्रो न्यायपालिकासँग पनि जोडिन्छ । जो महिलाहरु समाजमा बहिष्कार भएको महिलाहरु अनि, विभिन्न मुद्दा मामिला खेपिरहेका महिलाहरु बिना कारण यस्ता महिलाहरु जो चाँहि एकदमै आर्थिक रुपमा कमजोर महिलाहरु हुनुहन्थ्यो । उहाँहरुको न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरुलाई न्याय निरुपण गरी उहाँहरुलाई पुनः जिविकोपार्जनको काममा फर्काएका छौ । त्यस्तो महिलाहरु, जसकोे चाँहि एकदमै संवेदनशील केषहरु पनि थियो । त्यस्ता महिलाले पक्का स्थानीय सरकार आएको वा, जनप्रतिनिधि आएको अनुभुत गरेको छ । र, म ठोकुवाका साथ भन्छु हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा हजारौं महिलाहरु उत्साहित हुनुहुन्छ । नगरपालिकाले हाम्रो लागि काम गरिदिने रहेछ । हाम्रो पनि महिला जनप्रतिनिधि रहेछ भन्ने हिसाबले उहाँहरुले आभाष गर्नुभएको छ । उहाँहरुको विभिन्न माग आएको छ । त्यसलाई हामी क्रमशः सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौ ।
महिला लक्षित अन्य कार्यक्रम के–के छन त ?
महिला लक्षित कार्यक्रम भईरहेको यिनै भने । त्यसपछि हाम्रो नगरसभाले पनि पास गरेको छ । ‘विपन्न महिलासँग टेवा’ कार्यक्रम भनेर छ । अब, विपन्न कस्तालाई भन्ने कुरा छन् । तर, पनि हामी चाँहि त्यस्ता कुराहरुलाई खोज्छौ । हाम्रो नगरपालिकाभित्र कसले के खान्छ, कस्तो स्थितिको छ । हामलिाई थाहा छदैछ । यसकारण जसलाई गर्ने ईच्छा छ । स्रोत छैन, भनेदेखी हामीले उनलाई स्रोत छुट्याईदिन्छौ । र, ति महिलाहरुलाई चाँहि आयआर्जनमा जोडेर पैसा कमाउन, आफ्नो समाजमा क्षमता राख्नको लागि त्यो हैसियत हामी निर्माण गरिदिन्छौ ।
न्यायिक समिति संयोजक पनि हुनुहुन्छ । महिलाका समस्याहरु कती आए, कती समाधान भए ?
महिलाको समस्या चाँहि अहिलेसम्म आएको निवेदनको संख्यामा आधारमा ५० प्रतिशत त महिलाकै समस्या आउँछ । त्यसमा पनि महिलाकै लागि आएका निवेदनहरु चाँहि मेरो अनुभुतीमा छलफल गर्न सहज/सजिलो भएको छ । उहाँहरुले लचकता पनि अपनाउदो रहेछ । संम्यम्ता पनि अपनाउदो रहेछ । र, उसँग चाँहि त्यस्तो अन्तरद्धन्द पनि लामो गरौं भन्ने सोच राख्नुहुन्न रहेछ । त्यस कारणले गर्दाखेरी अहिले आएको निवेदनको आधारमा ५० प्रतिशत आएको छ । त्यसको चाँहि हामीले मलाई लाग्छ प्राय सबै केषहरु समाधान गरिहरेका छौ ।
काम गर्नलाई अफ्ठ्यारा र चुनौतीहरु के–के छन् ?
केही च्यालेन्जहरु छ । जस्तै न्यायिक समितिको कुरा गर्ने हो भने, एकजना कानुन अधिकृत न्यापालिकामा हुन्छ । त्यो चाँहि सरकारले कर्मचारी व्यावस्थापन गर्न चुकिरहेको छ । यो नगरपालिका सदरमुकामदेखी अलि टाढा भएकाले यहाँ त्यस्तो कानुन पढेको मान्छेहरु पाउन पनि गाह्रो छ । सल्लाहाकार नै राख्दा पनि टेलिफोनको भरमा गर्नुपर्ने यि, यस्ता अफ्ठ्यारा छन् । तथापी, पनि पाएको यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो । यसलाई मैले एकदमै राम्रो हिसाबले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछु । तर, यति कुरा हो आफू कर्मचारी हो वा भोलेन्टियर हो । अथवा कार्यकारी पोजिसन हो । यसमा चाँहि सबै रोल निर्वाह गर्नुपरेको अवस्था छ ।
भावि योजनाहरु के–के छन् ?
एक वडा एक व्यावसायलाई अपनाई महिलाहरुको क्षमता विकास र आर्यआर्जनमा बृद्धि गर्ने, शहकारीको माध्यमबाट महिला दिदीबहिनीलाई संगठीत र आत्मनिर्भर बनाउने, आमा समुह र महिला समुहलाई संस्थागत विकासमा जोड दिने तथा एक वडा एक महिला/आमा समुह भवन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रस्तुती चिसाङ शेर्पा
२०७६ जेठ ३१ गते बिहान ८ :२३ मा प्रकाशित